चर्को भोकमा के गर्ने ? – Medianp
बिहिबार, ०३, माघ, २०७५
चर्को भोकमा के गर्ने ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०७४१५:०७0
कहिलेकाहीँ मानिस विविध कारणवश लामो समय भोक खपेर बस्ने गर्छन् । यस्तो गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो । यसो गर्दा चक्कर लाग्ने खतरासमेत हुन सक्छ । त्यसपछि खानेवेला फेरि अर्को गल्ती गर्न पनि सक्छन्, टन्न खाएर । तर, लामो समयदेखिको चर्को भोकमा पेट भर्दा निकै विचार पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।
० लामो समयसम्म पेट खाली राखेर खाँदा कडा खाना प्रयोग गर्नु हुँदैन । अझ एकैपटक पेटभरि खानु त अझ बढी हानिकारक मानिन्छ । घन्टौँसम्म भोक खपेर बस्ने र चर्को भोकमा कडा खाना खाने गर्दा शरीरले पचाउन सक्दैन ।
० चर्को भोक भएको समय शक्तिवद्र्धक नरम प्रकृतिका खाना प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ, जस्तै– रसयुक्त फलफूल । यस्तो वेला पानीको मात्रा बढी हुने सिजनेबल फलफूल सेवन गर्दा रक्तसञ्चारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ र तागत पनि भरिन्छ ।
० चर्को भोकाएको अवस्थामा सीधै टन्न पानी पिउने काम पनि नगर्नुहोस् । चर्को भोकमा पानी पिउँदा पेट भरिएको अनुभूति त हुन्छ तर शरीरले आवश्यक शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन । सीधै पानी पिएर तत्काल ठोस पदार्थ खाँदा ग्यास्ट्रिकको समस्यासमेत निम्तिन सक्छ ।
त्यसैले यस्तो समय पानीको मात्रा पनि प्राप्त हुने नरम ठोस पदार्थमै जोड गर्दा राम्रो हुन्छ । बरु सलादको प्रयोग गर्दा फलदायी हुन्छ । चर्को भोकमा स्वभावैले मानिसलाई एकैपटक धेरै खानेकुरा खान मन हुन्छ । तर, यस्तो गर्नु गल्ती हो । यसो गर्दा मान्छे बेहोस भएर ढल्न पनि सक्छ ।
० चर्को भोक लाग्नु भनेको पेट खाली हुनु हो । लामो समयसम्म खाली भएको पेटमा चिल्लो र गुलियो खाँदा पनि असर पर्छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल चिया पिउनु पनि ठीक होइन । पिरो मसलेदार खानाले झनै असर पु-याउँछ । नयाँ पत्रिकाबाट
मस्कोबाट ७१ यात्रुसहित उडेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
विश्व सुन्दरी अनोक याई संसारकै महङ्गो मोडल
5 ÷ = 1
यदि तपाईले यस्तो सपना देख्नुभएमा बुझ्नुहोस् तपाईको विवाह हुदैछ !
चोकका पसलहरुमा गीत गाउँदै यी गायिकाले १३ हजार बालबालिकालाई दिइन् जीवनदान !
सुपरस्टार नायक बिराज भट्ट धेरैपछि यसरी देखिए स्टेजमा, डान्स देखेर दर्शक परे छक्क (भिडियो)
सावधान ! एक महिना अगाडी नै दिन्छ शरिरले हर्ट अट्याक हुनुको संकेत ! वेवास्ता नगरौँ, मृत्युबाट बचौँ !
घरमा कोहि दम रोगबाट पिडित हुनुहुन्छ ! दम भएपछि के गर्ने, के नगर्ने ? के खाने के नखाने ?
किन रिसाउँछन् तपाईका बच्चा, कतै यस्तो गम्भीर रोग त लागेको छैन्?
तपाईको कपाल झर्छ ? कतै तपाईले यस्ता गल्ती त गर्नुभएको छैन् हेनुहोस् अध्ययनले देखाएको छ यस्ता कारणहरु !
खानामा स्वादिलो बनाउने अजिनामोटो, आतङ्क र खराब हो त ?
सखरखण्डको पात अचुक औषधी बन्दै, क्यान्सरदेखि डाइबेटीज सम्बन्धी उपचारमा प्रयोग गरिने
यी हुन् बलिउडका आमा छोरा जस्तो देखिने विवाहित जोडी
यी हुन बलिउडमा अजय देवगनको ठूलो दुश्मन जसको अनुहार समेत हेर्न चाहदैनन्
पुरुषका यी ४ चिज देखेर हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरु
यस्ता लक्षणहरु दखा परेमा तुरुन्तै गराउनुहोस् कोलेस्ट्रोल जाँच
दुष्ट पत्नीले देखाउँने ६ संकेतहरु यस्ता छन् !
ब्याईफ्रेण्डको मोबाइलमा यस्तो भिडियो भेटेपछि युवतीले गरिन् विवाह नगर्ने घोषणा
महिला क्रिकेट–सेमिफाइनलमा नेपालले इण्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
बदलीः हल्का वर्षा हुने
बस दुर्घटनामा सातको मृत्यु, यी चारको सनाखत